‘सानालाई ऐ’न ठूलालाई चै’न’ ,पूर्वयुवराज पारसलाई छुट, आस्थामाथि उ’जुरी …हेर्नुहोस!
काठमाडौँ । नेपालको कानुन दैवले जानुन । एकै ठाउँ । घ’टना उस्तै प्रकृति अर्थात ‘दु’र्व्यवहार’ । तर, किन ‘सानालाई ऐ’न र ठूलालाई चै’न’ ? यो प्रश्न प्रहरी अधिकारी र सम्बन्धितप्रति ते’र्सिएको छ ।केही महिनाअघि पूर्वयुवराज पारस साहले विमानस्थलमा ड्यु’टीमा खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक (सई)माथि हा’तपातको प्रयास गरे । यस्तै गायिका आस्था राउतले पनि गत बुधबार फेसबुक लाइभमार्फत प्रहरीलाई त’थानाम गा’ली गरिन् । घ’टना पनि एकै ठाउँको थियो अर्थात त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ।
घ’टनाको प्रकति पनि एउटै हो, ‘प्रहरीमाथि दु’व्यवहार ।’ पारसवि’रुद्ध उ’जुरी दिने कसैको आँ’ट गरेन भने गायिका राउतवि’रुद्ध शुक्रबार उ’जुरी परेको छ । यसरी बुझौं कि पारसको ह’कमा का’नुन लागू भएन भने गायिका राउतको ह’कमा लागू भएको छ ।पारस पूर्वयुवराज हुन् भने राउत गायिका । यहाँ प’दको कुरा गर्ने हो भने गायिका राउतभन्दा पारस धेरै माथि छन् । पारस सु’रक्षा गा’र्डसहित गाडीमा यात्रा गर्छन् भने गायिका राउत स्कुटीमा यात्रा गर्छिन् । गत भदौ २ गते पूर्वयुवराज पारस शाहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्यु’टीमा रहेका प्रहरीमाथि हातपातै नै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सार्वजनिक भयो ।
आमा र छोराछोरीलाई थाइल्याण्ड जान लागेका बेला विमानस्थलमा बि’दाइका लागि पुगेका पारसले ड्यु’टीमा रहेका प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) माथि हा’तपात गरेका थिए । सार्वजनिकस्थलमै पारसले ब’र्दीधारी प्रहरीमाथि हा’तपात गरे । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भीआईपी क’क्षको सु’रक्षामा ख’टिएका सई ईश्वर खत्रीमाथि पारसले हा’तपात गरेका हुन् । आफ्ना छोरा र भाञ्जामाथि प्रहरीले ‘अ’पमान’ गरेको भन्दै पारसले सई खत्रीलाई छातीमा स’मातेर ध’कलेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । भिडियोमा देखिएको दृश्य हेर्दा पनि पूर्वयुवराज पारस फर्की–फर्की सई खत्रीमाथि झ’म्टिएको देखिएको छ ।
त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा ज’नताको सु’रक्षाका लागि ख’टिएका सु’रक्षाकर्मीमाथि दुव्र्’यवहार गर्ने पूर्वयुवराज पारसलाई का’रबाही गर्न मा’ग गरिएको थियो । सामान्य नागरिकले पारसको जस्तो ह’र्कत गथ्र्यो भने तत्कालै पक्राउ पु’र्जी जा’री गरेर स’मात्न सक्ने नेपाल प्रहरी पारस प्र’करणमा भने मौ’न रह्यो । सई खत्रीले पनि पारसवि’रुद्ध उ’जुरी हाल्न सकेनन् । सायद उनलाई तत्कालीन विमानस्थल प्रहरी ने’तृत्वले नै पारसवि’रुद्ध उ’जुरी न’हाल्न भनेका थिए । मिडियामा प्रहरी ने’तृत्वको नै चर्को आ’लोचना भएपछि तत्कालीन महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख शैलेश थापा क्षत्रीले घ’टनाको छा’नबिन प्रक्रिया अघि बढेको बताएका थिए ।
पछि पारसको घ’टनाबारे थापासँग बुझ्दा छा’नबिन भइरहेको भन्दै टार्दै आए । यसरी बुझ्न सकिन्छ कि पारसको घ’टनामा प्रहरी ड’राएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा चर्को आ’लोचना भएपछि पारसले सोही दिन सई खत्रीले आफ्नो छोरामाथि ड’ण्डा ब’र्साएपछि सहन नसकेको र उनीमाथि जा’इलागेको प्रतिक्रिया दिए । अनेकन् वि’वाद र अ’राजक क्रि’याकलापसँग जो’डिएका पारसले युवराज हुनुअघिदेखि नै मा’दक प’दार्थ से’वन गरेर सार्वजनिक स्थानमा हो’हल्ला, आम मानिसमाथि मा’रपिटदेखि फा’यरिङसम्ममा घ’टना गराउँदै आएको दृ’ष्टान्त छ ।
भिडियो सार्वजनिक भएपछि शुक्रबार साँझ प्रहरी जवान श्रेष्ठले गायिका राउतवि’रुद्ध विमानस्थल सु’रक्षा प्रहरी कार्यालयमा उ’जुरी दिएकी छन् । चे’कजाँचको क्रममा गायिका राउतले आफू ड्यू’टीमा रहँदा गा’लीगलौच र अ’भद्र व्य’वहार गरेकी भन्दै जवान श्रेष्ठले उ’जुरी दिएकी हुन् । श्रेष्ठको उ’जुरी विमानस्थल प्रहरी कार्यालयले महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा पठाएको छ । रानीपोखरीका प्रमुख विश्वराज पोखरेलले घ’टनाको अनुसन्धान भइरहेको बताए । यता शुक्रबार नै रुँदै राउतले फेसबुक लाइभमार्फत २–४ शब्द बढी बोलेको भन्दै मा’फी मा’गेकी छन् । यसविषयमा प्रतिक्रिया लिन सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीलाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।